One Young World Summit | The World of Pinkgold
Posted on December 6, 2009 by cuttiepinkgold
One Young World Summit ဆိုတာဘာလဲ?
နိုင်ငံပေါင်း 192 နိုင်ငံက လူငယ် 1500 ကို ခေါ်ယူမယ့် အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို Kofi Annan, Archbishop Desmond Tutu နဲ့ Bob Geldof တို့က ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက လာရောက်ကြမယ့် လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေ ၊ သူတို့ရဲ့ ရင်ထဲက စကားသံတွေကို ဖွင့်ဟစေမှာဖြစ်ပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Gathering တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
1984 ခုနှစ် Jan 1 ရက်ကစပြီး မွေးတဲ့သူတွေအားလုံး ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Candidate အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံက နှစ်ယောက်စီ ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ဦးရေတွေကိုတော့ နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ အချိုးအလိုက် ခေါ်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကို တက်ရောက်ကြတဲ့ လူငယ်တိုင်းဟာ 2010 ရဲ့ အဓိက Issue ခြောက်ခုကို ဆွေးနွေးတင်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့..
•	Developing Political Leadership forapositive future
•	Global Business and its role in shaping society through the economy
•	Inter-faith dialogue
•	The Environment and its protection
•	The Media, its changing identity and its power
•	Global Health, its polarities and impact
ဒီအစီအစဉ်ကို 2010 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ 8 ရက်နေ့ကနေ 10 ရက်နေ့ထိ လန်ဒန်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ မည်သူမဆို မိမိကိုယ်ကိုယ် Candidate တစ်ယောက်အဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ Facebook User တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်ရှင်။ ကိုယ့်ကို အရွေးခံရဖို့အတွက် မဲများများ ပေးခိုင်းရပါမယ်။ မဲများလေ အရွေးခံရဖို့ သေချာလေပါပဲ။ မဲပေးတဲ့ သူတွေကလည်း ကိုယ့်ကို စပွန်စာပေးမယ့် amount တစ်ခု ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်အတွက် တစ်ယောက်ကို ယူရို 3000 စီသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကိုယ့်စပွန်စာကို ကိုယ်ရှာရမှာတော့ အခက်အခဲ တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ One Young World Ofiicial Website မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မလည်း အဲ့ဒီမှာ Candidate တစ်ယောက်အဖြစ် မဲဆွယ်နေပါတယ်။ ကျွန်မကိုလည်း မဲပေး ပေးကြပါအုံးနော်။ Vote for Candidate နေရာလေးကို နှိပ်ပြီး မဲပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
Pls Click Here to VOTE Me.
Filed under General and tagged One Young World |	6 Comments
နေ့အိပ်မက် on December 6, 2009 at 12:33 pm said:
ဘယ့်နှယ် မြန်လိုက်တာ သူများတောင်မရေးရသေးဘူး :O
Pinkgold on December 6, 2009 at 12:36 pm said:
ရေးလေ သူများရဲ့.. ဒါမှ လူများများသိမှာပေါ့… အမတော့ မဲ 170 ကျော်နေတယ်..
နေ့အိပ်မက် on December 6, 2009 at 2:42 pm said:
အဟင့် တမီးက အပြင်းတစ်နေတာ… ၁၈၀တောင်ကျော်သွားပြီ.. ဘယ်လိုတော်မှန်းကိုမသိတာ
နေ့အိပ်မက် on December 6, 2009 at 2:43 pm said:
အပျင်းတစ်နေတယ်လို့ပြောတာ စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့.. 🙂
ဆရာကြီး on December 10, 2009 at 3:25 am said:
အစွမ်းကဖြင့်မပြဘူး။ မဲတော့လိုချင်နေတာ မလွန်လွန်းလား။ နင့်ဟာက စစ်တပ်က မဲဆွယ်နေတာနဲ့ တူနေပြီ။ မဲပေး မဲပေး ။ ဘာမှလည်းမရှိဘဲန့ မဲသာ အတင်းတောင်းနေတယ်။
cuttiepinkgold on December 10, 2009 at 3:36 am said:
ပေးချင်ပေး မပေးချင်နေ.. သိပ် စကားမများနဲ့